AMP plugin miaraka amin'ny slider carousel AMP - MG
AMP plugin miaraka amin'ny slider carousel AMP
Ny mpamorona Accelerated Mobile Pages (AMP) amin'ny famoronana pejy Google AMP , ny plugins AMP ary ny mpamorona tag AMPHTML dia manohana ny famoronana automatique carousel AMP.
Ny slider carousel AMP dia noforonina avy amin'ny sary rehetra izay ao amin'ny faritra lahatsoratra (ao amin'ny faritra 'itemprop = articleBody' ).
<amp-carousel> -Slider fampidirana
Ny Accelerated Mobile Pages Generator dia mamorona carousel AMP amin'ny alàlan'ny tag 'amp-carousel' raha toa ka mihoatra ny iray ny sary ato amin'ny faritra misy ny lahatsoratra!
Ny carousel AMP dia manolo ny sarin'ny lahatsoratra mahazatra ao amin'ny pejy AMPHTML.
Raha tokony ho ny carousel AMP dia ny sary tsotra ihany no aseho na ilay faritra mijanona foana foana.
Ny sary ao amin'ny carousel AMP dia omena caption. Ny <img> tag toetra 'alt =' sy 'titre =' dia nalaina avy tamin'ny pejy voalohany ho toy ny lahatsoratra. Raha tsy voafaritra ao amin'ny pejy voalohany ireo toetra ireo dia mampiasa ny tag <Title> an'ny lahatsoratra ilay mpanafaingana pejy finday haingana.